हामी सञ्चार को गैर-मौखिक तरिकामा बुझ्न
संचार को गैर-मौखिक प्रकारका हामीलाई भन्दा बढी जानकारी दिन। यसलाई हामी हाम्रो साँचो भावना व्यक्त, शरीर भाषा मार्फत छ। यो महारत गर्ने मान्छे, सजिलै छलछाम पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। तर केही आफ्नो इशाराहरू अधिकांश नियन्त्रण गर्न र पनि झूट डिटेक्टर धोखा सक्षम छन्। त्यस्ता मानिसहरूलाई धेरै केहि हुनत।
सञ्चार को मौखिक र गैर-मौखिक तरिका
आधुनिक मानिस दैनिक लगभग 30 हजार शब्द भन्छन्। त्यो बोलीले छ संचार को मौखिक हालतमा। त्यहाँ धेरै छन् बोलीको प्रकार बोल्न, सुन्न / धारणा, पढाइ र लेखन: गतिविधि। गैर-मौखिक संचार को प्रकार - यो इशाराहरू, मुद्रा, स्वरको आरोह अवरोह, अनुहार अभिव्यक्ति, देखिन्छ, मनोवृत्ति, आदि ...
Kinestetika Pantomime, अनुहार अभिव्यक्ति र zhestiku समावेश छ। यो भावना र भावना को प्रकटीकरण को बाह्य पक्ष सन्दर्भमा। टाउको र हात को आन्दोलन - सञ्चार सबैभन्दा प्राचीन तरिका हो। आज, शरीर भाषा एकदम बुझे हुन्छ, त्यहाँ साँचो यसको आधारमा मानव शब्दहरू अर्थ को "पढाइ" मा पनि एक पुस्तक हो involuntary आन्दोलनहरु। हरेक राष्ट्र फरक इशाराहरू प्रयोग गर्दछ। उदाहरणका लागि, फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू यो प्रयोग गर्दै संचार को फारम 80 पटक र Mexicans - - 180 बारेमा 1 पटक इटालेलीहरू एक घण्टामा।
अनुहार अभिव्यक्ति, टी। ई अनुहार मांसपेशीमा को आन्दोलन, होश को मुख्य सूचक हो। यो घटक, अर्थात्। ई कुराकानीमा समयमा बिना, हामी देख्न जब interlocutor व्यक्ति सबै जानकारी को बारे 10-15% हराउछ। को भावनात्मक राज्य अमेरिका मा मांसपेशिहरु को सबै आन्दोलन समन्वित। घर सूचनात्मक लोड - को ओठ र eyebrows मा।
आँखा सम्पर्क पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं दुर्लभ र छोटो नजर हो भने, यो तपाईं झूट छन् भन्ने संकेत हुन सक्छ। तर ठीक झूट चिन्न गर्न, यो महत्त्वपूर्ण खाता अन्य गैर-मौखिक मा लिन छ संचार को प्रकारका। नजर व्यवसाय (को interlocutor मा निधारमा को एकाग्रता), सामाजिक (मुख र आँखा बीच त्रिकोण), घनिष्ठ (स्तन उचाइ मा) हुन सक्छ।
Pantomime gait, मुद्रा, motility र सामान्य मुद्रा जस्ता गैर-मौखिक संचार मोड समावेश छ। Gait को ताल, गतिशीलता र आयाम द्वारा फरक हुन्छ। यो सूचक अनुसार व्यक्ति को स्वास्थ्य को एक राज्य, र प्रकृति, मुड र उमेर रूपमा देख्न सकिन्छ। languid gait पीडित, आनन्दित मा मा - sprawling - प्रकाश, गर्व छ। को जांघों मा आफ्नो हात जो राख्न, मान्छे सबभन्दा छोटो समय मा लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास गर्नु यो याद छ।
त्यहाँ जो प्रत्येक मानिसहरूलाई कसरी अरूको स्थिति को सम्बन्ध मा आफ्नै स्थिति बुझ्ने देखाउँछ, स्थिर स्थितिहरू हजारौं हुनुहुन्छ। राखे-फिर्ता स्थिति धेरै हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई मा निहित छ। पोज खोल्ने वा बन्द कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
छोटो मा, संचार को गैर-मौखिक हालतमा को अध्ययन, तपाईँले सजिलै आफ्नो साझेदार के चाहन्छ बुझ्न सक्छौं। तपाईं provocations बोलिहाल्यौं र झूट र insincerity पहिचान गर्न, सबै भन्दा अवस्थामा सिक्न कम संभावना हुनेछु। यी कौशल सबै परिस्थितिमा उपयोगी हुनेछ: कसरी वार्ता साथै व्यक्तिगत जीवनमा। हामी अक्सर कुरा जो प्रमुख र यति मा। एन मूल ज्ञान तपाईं आफ्नो प्रश्न को सबै भन्दा जवाफ फेला पार्न मद्दत गर्नेछ सम्बन्ध, कायम गर्न जारी राख्न कसरी निर्णय गर्न आवश्यक छ। मुख्य कुरा - अभ्यास र ज्ञान प्रयोग।
गठन र ascertaining प्रयोग: विवरण र विशेषताहरु
कसरी छोडेर पछि नयाँ जीवन सुरु गर्न
अभूतपूर्व स्मृति: विशेष गरी कसरी विकास गर्न
रेस्टुरेन्ट सेन्ट पीटर्सबर्ग मा "पेन्टहाउस": समीक्षा र फोटो
अभिनेता अलेक्जेन्डर Nevsky - रचनात्मक जीवनी। भूमिकाबारे Aleksandra Nevskogo
Windows7कम्प्युटर बन्द घडी। सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम को समीक्षा
होटल Smartline मिरामार Petit Palais3* (टुनिशिया / जर्बा): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
जब आफ्नो दाँत बच्चाहरु लिंदा सुरु गर्न?
जहाँ क्रास्नोडार जाने? "छायाँ" - एक स्वादिष्ट छुट्टी लागि रेस्टुरेन्ट
प्रोटिन - एक महत्त्वपूर्ण संघटक
कसरी ओवन मा पन्नी मा सामन तयार
योकोटरिंगबर्ग नाटक थिएटर: ठेगाना, पोस्टर, वेबसाइट
वर्णमाला veypinga: स्वाद बेकर स्वाद